Iyo WiFi yekubatanidza bhatani inosvika pane iyo Apple Tarisa newatchOS 5 | Ndinobva mac
Ehe, iyo Apple Watch yatobatana neWiFi netiweki otomatiki nhasi Asi ikozvino neshanduro nyowani yeiyo sisitimu inoshanda yakaburitswa yevatambi veWOSOS 5, ichave mushandisi iye amene anosarudza network iyo yaanoda kubatanidza.
Chinhu chakanaka pamusoro pesisitimu yazvino ndechekuti haunetse nekuti kubatana kwacho kunoitwa zvakananga kubva ku iPhone uye wachi inoshandisa izvi kubatanidza kunetiweki, asi ikozvino mukana we Sarudza network yekubatanidza nayo zvakakwana zvakasununguka.
Inoshanda pane ese watchOS 5 inoenderana mamodheru
Mune ino kesi, sekuziva kwatatoita, Apple inosiya parutivi maSystem 0 mamodheru mune yekuvandudza uye nekudaro zviri pachena kuti ndivo chete vachange vasina iro basa idzva iro zvinoita kunge vane Series 1, Series 2, uye Series 3. Iyi sarudzo inonakidza chaizvo kana tiri kure ne iPhone yedu, nekuti inotibvumidza kusarudza network nekunyora mavara pawatch screen.
Isu tinongoda yekutanga beta vhezheni yewachi kuti iwanikwe zvakare kune vanogadzira, avo vakanyunyuta kuti panguva yekumisikidza michina yavo yanga yaitwa kunge isingabatsiri. Chero zvazvingaitika, iri rinenge riri dambudziko chairo uye hatitende kuti zvinotora nguva yakareba kuti zvigadziriswe, kuitira kana zvakanakisa zvingaitwa nevamwe vese vashandisi kugara kunze kweshanduro dze beta kunyangwe kushanda kwacho kuchiratidzika kunge kuri uve wakanaka chaizvo (kunze kweizvozvo kesi yeOSOSOS 5).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo WiFi yekubatanidza bhatani inosvika pane iyo Apple Tarisa newatchOS 5
Nguva yakanaka yekutenga SimCity 4 Deluxe Edition mutambo
AirPlay 2 iri kuuya kuSonos vatauri muna Chikunguru